Myanmar Industrial Zone - Myanmar Real Estate, Industrial for sale and rent | ShweProperty
မြန်မာပြည် အတွင်းရှိ ရောင်းရန် ငှားရန် ရှိသော စက်မှုဇုန် များ ကို သင့် စိတ်ကြိုက် ရှာဖွေပါ။
ငှားရန် ရှာရန် မြို့ ၊ မြို့နယ်များ:
10 သိန်း 20 သိန်း 30 သိန်း 40 သိန်း 50 သိန်း 60 သိန်း 70 သိန်း 80 သိန်း 90 သိန်း 100 သိန်း 110 သိန်း 120 သိန်း 130 သိန်း 140 သိန်း 150 သိန်း 160 သိန်း 170 သိန်း 180 သိန်း 190 သိန်း 200 သိန်း 210 သိန်း 220 သိန်း 230 သိန်း 240 သိန်း 250 သိန်း 260 သိန်း 270 သိန်း 280 သိန်း 290 သိန်း 300 သိန်း 310 သိန်း 320 သိန်း 330 သိန်း 340 သိန်း 350 သိန်း 360 သိန်း 370 သိန်း 380 သိန်း 390 သိန်း 400 သိန်း 410 သိန်း 420 သိန်း 430 သိန်း 440 သိန်း 450 သိန်း 460 သိန်း 470 သိန်း 480 သိန်း 490 သိန်း 500 သိန်း 510 သိန်း 520 သိန်း 530 သိန်း 540 သိန်း 550 သိန်း 560 သိန်း 570 သိန်း 580 သိန်း 590 သိန်း 600 သိန်း 610 သိန်း 620 သိန်း 630 သိန်း 640 သိန်း 650 သိန်း 660 သိန်း 670 သိန်း 680 သိန်း 690 သိန်း 700 သိန်း 710 သိန်း 720 သိန်း 730 သိန်း 740 သိန်း 750 သိန်း 760 သိန်း 770 သိန်း 780 သိန်း 790 သိန်း 800 သိန်း 810 သိန်း 820 သိန်း 830 သိန်း 840 သိန်း 850 သိန်း 860 သိန်း 870 သိန်း 880 သိန်း 890 သိန်း 900 သိန်း 910 သိန်း 920 သိန်း 930 သိန်း 940 သိန်း 950 သိန်း 960 သိန်း 970 သိန်း 980 သိန်း 990 သိန်း 1000 သိန်း 1010 သိန်း 1020 သိန်း 1030 သိန်း 1040 သိန်း 1050 သိန်း 1060 သိန်း 1070 သိန်း 1080 သိန်း 1090 သိန်း 1100 သိန်း 1110 သိန်း 1120 သိန်း 1130 သိန်း 1140 သိန်း 1150 သိန်း 1160 သိန်း 1170 သိန်း 1180 သိန်း 1190 သိန်း 1200 သိန်း 1210 သိန်း 1220 သိန်း 1230 သိန်း 1240 သိန်း 1250 သိန်း 1260 သိန်း 1270 သိန်း 1280 သိန်း 1290 သိန်း 1300 သိန်း 1310 သိန်း 1320 သိန်း 1330 သိန်း 1340 သိန်း 1350 သိန်း 1360 သိန်း 1370 သိန်း 1380 သိန်း 1390 သိန်း 1400 သိန်း 1410 သိန်း 1420 သိန်း 1430 သိန်း 1440 သိန်း 1450 သိန်း 1460 သိန်း 1470 သိန်း 1480 သိန်း 1490 သိန်း 1500 သိန်း 1510 သိန်း 1520 သိန်း 1530 သိန်း 1540 သိန်း 1550 သိန်း 1560 သိန်း 1570 သိန်း 1580 သိန်း 1590 သိန်း 1600 သိန်း 1610 သိန်း 1620 သိန်း 1630 သိန်း 1640 သိန်း 1650 သိန်း 1660 သိန်း 1670 သိန်း 1680 သိန်း 1690 သိန်း 1700 သိန်း 1710 သိန်း 1720 သိန်း 1730 သိန်း 1740 သိန်း 1750 သိန်း 1760 သိန်း 1770 သိန်း 1780 သိန်း 1790 သိန်း 1800 သိန်း 1810 သိန်း 1820 သိန်း 1830 သိန်း 1840 သိန်း 1850 သိန်း 1860 သိန်း 1870 သိန်း 1880 သိန်း 1890 သိန်း 1900 သိန်း 1910 သိန်း 1920 သိန်း 1930 သိန်း 1940 သိန်း 1950 သိန်း 1960 သိန်း 1970 သိန်း 1980 သိန်း 1990 သိန်း 2000 သိန်း 2010 သိန်း 2020 သိန်း 2030 သိန်း 2040 သိန်း 2050 သိန်း 2060 သိန်း 2070 သိန်း 2080 သိန်း 2090 သိန်း 2100 သိန်း 2110 သိန်း 2120 သိန်း 2130 သိန်း 2140 သိန်း 2150 သိန်း 2160 သိန်း 2170 သိန်း 2180 သိန်း 2190 သိန်း 2200 သိန်း 2210 သိန်း 2220 သိန်း 2230 သိန်း 2240 သိန်း 2250 သိန်း 2260 သိန်း 2270 သိန်း 2280 သိန်း 2290 သိန်း 2300 သိန်း 2310 သိန်း 2320 သိန်း 2330 သိန်း 2340 သိန်း 2350 သိန်း 2360 သိန်း 2370 သိန်း 2380 သိန်း 2390 သိန်း 2400 သိန်း 2410 သိန်း 2420 သိန်း 2430 သိန်း 2440 သိန်း 2450 သိန်း 2460 သိန်း 2470 သိန်း 2480 သိန်း 2490 သိန်း 2500 သိန်း 2510 သိန်း 2520 သိန်း 2530 သိန်း 2540 သိန်း 2550 သိန်း 2560 သိန်း 2570 သိန်း 2580 သိန်း 2590 သိန်း 2600 သိန်း 2610 သိန်း 2620 သိန်း 2630 သိန်း 2640 သိန်း 2650 သိန်း 2660 သိန်း 2670 သိန်း 2680 သိန်း 2690 သိန်း 2700 သိန်း 2710 သိန်း 2720 သိန်း 2730 သိန်း 2740 သိန်း 2750 သိန်း 2760 သိန်း 2770 သိန်း 2780 သိန်း 2790 သိန်း 2800 သိန်း 2810 သိန်း 2820 သိန်း 2830 သိန်း 2840 သိန်း 2850 သိန်း 2860 သိန်း 2870 သိန်း 2880 သိန်း 2890 သိန်း 2900 သိန်း 2910 သိန်း 2920 သိန်း 2930 သိန်း 2940 သိန်း 2950 သိန်း 2960 သိန်း 2970 သိန်း 2980 သိန်း 2990 သိန်း 3000 သိန်း 3010 သိန်း 3020 သိန်း 3030 သိန်း 3040 သိန်း 3050 သိန်း 3060 သိန်း 3070 သိန်း 3080 သိန်း 3090 သိန်း 3100 သိန်း 3110 သိန်း 3120 သိန်း 3130 သိန်း 3140 သိန်း 3150 သိန်း 3160 သိန်း 3170 သိန်း 3180 သိန်း 3190 သိန်း 3200 သိန်း 3210 သိန်း 3220 သိန်း 3230 သိန်း 3240 သိန်း 3250 သိန်း 3260 သိန်း 3270 သိန်း 3280 သိန်း 3290 သိန်း 3300 သိန်း 3310 သိန်း 3320 သိန်း 3330 သိန်း 3340 သိန်း 3350 သိန်း 3360 သိန်း 3370 သိန်း 3380 သိန်း 3390 သိန်း 3400 သိန်း 3410 သိန်း 3420 သိန်း 3430 သိန်း 3440 သိန်း 3450 သိန်း 3460 သိန်း 3470 သိန်း 3480 သိန်း 3490 သိန်း 3500 သိန်း 3510 သိန်း 3520 သိန်း 3530 သိန်း 3540 သိန်း 3550 သိန်း 3560 သိန်း 3570 သိန်း 3580 သိန်း 3590 သိန်း 3600 သိန်း 3610 သိန်း 3620 သိန်း 3630 သိန်း 3640 သိန်း 3650 သိန်း 3660 သိန်း 3670 သိန်း 3680 သိန်း 3690 သိန်း 3700 သိန်း 3710 သိန်း 3720 သိန်း 3730 သိန်း 3740 သိန်း 3750 သိန်း 3760 သိန်း 3770 သိန်း 3780 သိန်း 3790 သိန်း 3800 သိန်း 3810 သိန်း 3820 သိန်း 3830 သိန်း 3840 သိန်း 3850 သိန်း 3860 သိန်း 3870 သိန်း 3880 သိန်း 3890 သိန်း 3900 သိန်း 3910 သိန်း 3920 သိန်း 3930 သိန်း 3940 သိန်း 3950 သိန်း 3960 သိန်း 3970 သိန်း 3980 သိန်း 3990 သိန်း 4000 သိန်း 4010 သိန်း 4020 သိန်း 4030 သိန်း 4040 သိန်း 4050 သိန်း 4060 သိန်း 4070 သိန်း 4080 သိန်း 4090 သိန်း 4100 သိန်း 4110 သိန်း 4120 သိန်း 4130 သိန်း 4140 သိန်း 4150 သိန်း 4160 သိန်း 4170 သိန်း 4180 သိန်း 4190 သိန်း 4200 သိန်း 4210 သိန်း 4220 သိန်း 4230 သိန်း 4240 သိန်း 4250 သိန်း 4260 သိန်း 4270 သိန်း 4280 သိန်း 4290 သိန်း 4300 သိန်း 4310 သိန်း 4320 သိန်း 4330 သိန်း 4340 သိန်း 4350 သိန်း 4360 သိန်း 4370 သိန်း 4380 သိန်း 4390 သိန်း 4400 သိန်း 4410 သိန်း 4420 သိန်း 4430 သိန်း 4440 သိန်း 4450 သိန်း 4460 သိန်း 4470 သိန်း 4480 သိန်း 4490 သိန်း 4500 သိန်း 4510 သိန်း 4520 သိန်း 4530 သိန်း 4540 သိန်း 4550 သိန်း 4560 သိန်း 4570 သိန်း 4580 သိန်း 4590 သိန်း 4600 သိန်း 4610 သိန်း 4620 သိန်း 4630 သိန်း 4640 သိန်း 4650 သိန်း 4660 သိန်း 4670 သိန်း 4680 သိန်း 4690 သိန်း 4700 သိန်း 4710 သိန်း 4720 သိန်း 4730 သိန်း 4740 သိန်း 4750 သိန်း 4760 သိန်း 4770 သိန်း 4780 သိန်း 4790 သိန်း 4800 သိန်း 4810 သိန်း 4820 သိန်း 4830 သိန်း 4840 သိန်း 4850 သိန်း 4860 သိန်း 4870 သိန်း 4880 သိန်း 4890 သိန်း 4900 သိန်း 4910 သိန်း 4920 သိန်း 4930 သိန်း 4940 သိန်း 4950 သိန်း 4960 သိန်း 4970 သိန်း 4980 သိန်း 4990 သိန်း 5000 သိန်း 5010 သိန်း 5020 သိန်း 5030 သိန်း 5040 သိန်း 5050 သိန်း 5060 သိန်း 5070 သိန်း 5080 သိန်း 5090 သိန်း 5100 သိန်း 5110 သိန်း 5120 သိန်း 5130 သိန်း 5140 သိန်း 5150 သိန်း 5160 သိန်း 5170 သိန်း 5180 သိန်း 5190 သိန်း 5200 သိန်း 5210 သိန်း 5220 သိန်း 5230 သိန်း 5240 သိန်း 5250 သိန်း 5260 သိန်း 5270 သိန်း 5280 သိန်း 5290 သိန်း 5300 သိန်း 5310 သိန်း 5320 သိန်း 5330 သိန်း 5340 သိန်း 5350 သိန်း 5360 သိန်း 5370 သိန်း 5380 သိန်း 5390 သိန်း 5400 သိန်း 5410 သိန်း 5420 သိန်း 5430 သိန်း 5440 သိန်း 5450 သိန်း 5460 သိန်း 5470 သိန်း 5480 သိန်း 5490 သိန်း 5500 သိန်း 5510 သိန်း 5520 သိန်း 5530 သိန်း 5540 သိန်း 5550 သိန်း 5560 သိန်း 5570 သိန်း 5580 သိန်း 5590 သိန်း 5600 သိန်း 5610 သိန်း 5620 သိန်း 5630 သိန်း 5640 သိန်း 5650 သိန်း 5660 သိန်း 5670 သိန်း 5680 သိန်း 5690 သိန်း 5700 သိန်း 5710 သိန်း 5720 သိန်း 5730 သိန်း 5740 သိန်း 5750 သိန်း 5760 သိန်း 5770 သိန်း 5780 သိန်း 5790 သိန်း 5800 သိန်း 5810 သိန်း 5820 သိန်း 5830 သိန်း 5840 သိန်း 5850 သိန်း 5860 သိန်း 5870 သိန်း 5880 သိန်း 5890 သိန်း 5900 သိန်း 5910 သိန်း 5920 သိန်း 5930 သိန်း 5940 သိန်း 5950 သိန်း 5960 သိန်း 5970 သိန်း 5980 သိန်း 5990 သိန်း 6000 သိန်း 6010 သိန်း 6020 သိန်း 6030 သိန်း 6040 သိန်း 6050 သိန်း 6060 သိန်း 6070 သိန်း 6080 သိန်း 6090 သိန်း 6100 သိန်း 6110 သိန်း 6120 သိန်း 6130 သိန်း 6140 သိန်း 6150 သိန်း 6160 သိန်း 6170 သိန်း 6180 သိန်း 6190 သိန်း 6200 သိန်း 6210 သိန်း 6220 သိန်း 6230 သိန်း 6240 သိန်း 6250 သိန်း 6260 သိန်း 6270 သိန်း 6280 သိန်း 6290 သိန်း 6300 သိန်း 6310 သိန်း 6320 သိန်း 6330 သိန်း 6340 သိန်း 6350 သိန်း 6360 သိန်း 6370 သိန်း 6380 သိန်း 6390 သိန်း 6400 သိန်း 6410 သိန်း 6420 သိန်း 6430 သိန်း 6440 သိန်း 6450 သိန်း 6460 သိန်း 6470 သိန်း 6480 သိန်း 6490 သိန်း 6500 သိန်း 6510 သိန်း 6520 သိန်း 6530 သိန်း 6540 သိန်း 6550 သိန်း 6560 သိန်း 6570 သိန်း 6580 သိန်း 6590 သိန်း 6600 သိန်း 6610 သိန်း 6620 သိန်း 6630 သိန်း 6640 သိန်း 6650 သိန်း 6660 သိန်း 6670 သိန်း 6680 သိန်း 6690 သိန်း 6700 သိန်း 6710 သိန်း 6720 သိန်း 6730 သိန်း 6740 သိန်း 6750 သိန်း 6760 သိန်း 6770 သိန်း 6780 သိန်း 6790 သိန်း 6800 သိန်း 6810 သိန်း 6820 သိန်း 6830 သိန်း 6840 သိန်း 6850 သိန်း 6860 သိန်း 6870 သိန်း 6880 သိန်း 6890 သိန်း 6900 သိန်း 6910 သိန်း 6920 သိန်း 6930 သိန်း 6940 သိန်း 6950 သိန်း 6960 သိန်း 6970 သိန်း 6980 သိန်း 6990 သိန်း 7000 သိန်း 7010 သိန်း 7020 သိန်း 7030 သိန်း 7040 သိန်း 7050 သိန်း 7060 သိန်း 7070 သိန်း 7080 သိန်း 7090 သိန်း 7100 သိန်း 7110 သိန်း 7120 သိန်း 7130 သိန်း 7140 သိန်း 7150 သိန်း 7160 သိန်း 7170 သိန်း 7180 သိန်း 7190 သိန်း 7200 သိန်း 7210 သိန်း 7220 သိန်း 7230 သိန်း 7240 သိန်း 7250 သိန်း 7260 သိန်း 7270 သိန်း 7280 သိန်း 7290 သိန်း 7300 သိန်း 7310 သိန်း 7320 သိန်း 7330 သိန်း 7340 သိန်း 7350 သိန်း 7360 သိန်း 7370 သိန်း 7380 သိန်း 7390 သိန်း 7400 သိန်း 7410 သိန်း 7420 သိန်း 7430 သိန်း 7440 သိန်း 7450 သိန်း 7460 သိန်း 7470 သိန်း 7480 သိန်း 7490 သိန်း 7500 သိန်း 7510 သိန်း 7520 သိန်း 7530 သိန်း 7540 သိန်း 7550 သိန်း 7560 သိန်း 7570 သိန်း 7580 သိန်း 7590 သိန်း 7600 သိန်း 7610 သိန်း 7620 သိန်း 7630 သိန်း 7640 သိန်း 7650 သိန်း 7660 သိန်း 7670 သိန်း 7680 သိန်း 7690 သိန်း 7700 သိန်း 7710 သိန်း 7720 သိန်း 7730 သိန်း 7740 သိန်း 7750 သိန်း 7760 သိန်း 7770 သိန်း 7780 သိန်း 7790 သိန်း 7800 သိန်း 7810 သိန်း 7820 သိန်း 7830 သိန်း 7840 သိန်း 7850 သိန်း 7860 သိန်း 7870 သိန်း 7880 သိန်း 7890 သိန်း 7900 သိန်း 7910 သိန်း 7920 သိန်း 7930 သိန်း 7940 သိန်း 7950 သိန်း 7960 သိန်း 7970 သိန်း 7980 သိန်း 7990 သိန်း 8000 သိန်း 8010 သိန်း 8020 သိန်း 8030 သိန်း 8040 သိန်း 8050 သိန်း 8060 သိန်း 8070 သိန်း 8080 သိန်း 8090 သိန်း 8100 သိန်း 8110 သိန်း 8120 သိန်း 8130 သိန်း 8140 သိန်း 8150 သိန်း 8160 သိန်း 8170 သိန်း 8180 သိန်း 8190 သိန်း 8200 သိန်း 8210 သိန်း 8220 သိန်း 8230 သိန်း 8240 သိန်း 8250 သိန်း 8260 သိန်း 8270 သိန်း 8280 သိန်း 8290 သိန်း 8300 သိန်း 8310 သိန်း 8320 သိန်း 8330 သိန်း 8340 သိန်း 8350 သိန်း 8360 သိန်း 8370 သိန်း 8380 သိန်း 8390 သိန်း 8400 သိန်း 8410 သိန်း 8420 သိန်း 8430 သိန်း 8440 သိန်း 8450 သိန်း 8460 သိန်း 8470 သိန်း 8480 သိန်း 8490 သိန်း 8500 သိန်း 8510 သိန်း 8520 သိန်း 8530 သိန်း 8540 သိန်း 8550 သိန်း 8560 သိန်း 8570 သိန်း 8580 သိန်း 8590 သိန်း 8600 သိန်း 8610 သိန်း 8620 သိန်း 8630 သိန်း 8640 သိန်း 8650 သိန်း 8660 သိန်း 8670 သိန်း 8680 သိန်း 8690 သိန်း 8700 သိန်း 8710 သိန်း 8720 သိန်း 8730 သိန်း 8740 သိန်း 8750 သိန်း 8760 သိန်း 8770 သိန်း 8780 သိန်း 8790 သိန်း 8800 သိန်း 8810 သိန်း 8820 သိန်း 8830 သိန်း 8840 သိန်း 8850 သိန်း 8860 သိန်း 8870 သိန်း 8880 သိန်း 8890 သိန်း 8900 သိန်း 8910 သိန်း 8920 သိန်း 8930 သိန်း 8940 သိန်း 8950 သိန်း 8960 သိန်း 8970 သိန်း 8980 သိန်း 8990 သိန်း 9000 သိန်း 9010 သိန်း 9020 သိန်း 9030 သိန်း 9040 သိန်း 9050 သိန်း 9060 သိန်း 9070 သိန်း 9080 သိန်း 9090 သိန်း 9100 သိန်း 9110 သိန်း 9120 သိန်း 9130 သိန်း 9140 သိန်း 9150 သိန်း 9160 သိန်း 9170 သိန်း 9180 သိန်း 9190 သိန်း 9200 သိန်း 9210 သိန်း 9220 သိန်း 9230 သိန်း 9240 သိန်း 9250 သိန်း 9260 သိန်း 9270 သိန်း 9280 သိန်း 9290 သိန်း 9300 သိန်း 9310 သိန်း 9320 သိန်း 9330 သိန်း 9340 သိန်း 9350 သိန်း 9360 သိန်း 9370 သိန်း 9380 သိန်း 9390 သိန်း 9400 သိန်း 9410 သိန်း 9420 သိန်း 9430 သိန်း 9440 သိန်း 9450 သိန်း 9460 သိန်း 9470 သိန်း 9480 သိန်း 9490 သိန်း 9500 သိန်း 9510 သိန်း 9520 သိန်း 9530 သိန်း 9540 သိန်း 9550 သိန်း 9560 သိန်း 9570 သိန်း 9580 သိန်း 9590 သိန်း 9600 သိန်း 9610 သိန်း 9620 သိန်း 9630 သိန်း 9640 သိန်း 9650 သိန်း 9660 သိန်း 9670 သိန်း 9680 သိန်း 9690 သိန်း 9700 သိန်း 9710 သိန်း 9720 သိန်း 9730 သိန်း 9740 သိန်း 9750 သိန်း 9760 သိန်း 9770 သိန်း 9780 သိန်း 9790 သိန်း 9800 သိန်း 9810 သိန်း 9820 သိန်း 9830 သိန်း 9840 သိန်း 9850 သိန်း 9860 သိန်း 9870 သိန်း 9880 သိန်း 9890 သိန်း 9900 သိန်း 9910 သိန်း 9920 သိန်း 9930 သိန်း 9940 သိန်း 9950 သိန်း 9960 သိန်း 9970 သိန်း 9980 သိန်း 9990 သိန်း 10000 သိန်း အများဆုံး ဈေးနှုန်း
1 သိန်း 11 သိန်း 21 သိန်း 31 သိန်း 41 သိန်း 51 သိန်း 61 သိန်း 71 သိန်း 81 သိန်း 91 သိန်း 101 သိန်း 111 သိန်း 121 သိန်း 131 သိန်း 141 သိန်း 151 သိန်း 161 သိန်း 171 သိန်း 181 သိန်း 191 သိန်း 201 သိန်း 211 သိန်း 221 သိန်း 231 သိန်း 241 သိန်း 251 သိန်း 261 သိန်း 271 သိန်း 281 သိန်း 291 သိန်း 301 သိန်း 311 သိန်း 321 သိန်း 331 သိန်း 341 သိန်း 351 သိန်း 361 သိန်း 371 သိန်း 381 သိန်း 391 သိန်း 401 သိန်း 411 သိန်း 421 သိန်း 431 သိန်း 441 သိန်း 451 သိန်း 461 သိန်း 471 သိန်း 481 သိန်း 491 သိန်း 501 သိန်း 511 သိန်း 521 သိန်း 531 သိန်း 541 သိန်း 551 သိန်း 561 သိန်း 571 သိန်း 581 သိန်း 591 သိန်း 601 သိန်း 611 သိန်း 621 သိန်း 631 သိန်း 641 သိန်း 651 သိန်း 661 သိန်း 671 သိန်း 681 သိန်း 691 သိန်း 701 သိန်း 711 သိန်း 721 သိန်း 731 သိန်း 741 သိန်း 751 သိန်း 761 သိန်း 771 သိန်း 781 သိန်း 791 သိန်း 801 သိန်း 811 သိန်း 821 သိန်း 831 သိန်း 841 သိန်း 851 သိန်း 861 သိန်း 871 သိန်း 881 သိန်း 891 သိန်း 901 သိန်း 911 သိန်း 921 သိန်း 931 သိန်း 941 သိန်း 951 သိန်း 961 သိန်း 971 သိန်း 981 သိန်း 991 သိန်း 1001 သိန်း 1011 သိန်း 1021 သိန်း 1031 သိန်း 1041 သိန်း 1051 သိန်း 1061 သိန်း 1071 သိန်း 1081 သိန်း 1091 သိန်း 1101 သိန်း 1111 သိန်း 1121 သိန်း 1131 သိန်း 1141 သိန်း 1151 သိန်း 1161 သိန်း 1171 သိန်း 1181 သိန်း 1191 သိန်း 1201 သိန်း 1211 သိန်း 1221 သိန်း 1231 သိန်း 1241 သိန်း 1251 သိန်း 1261 သိန်း 1271 သိန်း 1281 သိန်း 1291 သိန်း 1301 သိန်း 1311 သိန်း 1321 သိန်း 1331 သိန်း 1341 သိန်း 1351 သိန်း 1361 သိန်း 1371 သိန်း 1381 သိန်း 1391 သိန်း 1401 သိန်း 1411 သိန်း 1421 သိန်း 1431 သိန်း 1441 သိန်း 1451 သိန်း 1461 သိန်း 1471 သိန်း 1481 သိန်း 1491 သိန်း 1501 သိန်း 1511 သိန်း 1521 သိန်း 1531 သိန်း 1541 သိန်း 1551 သိန်း 1561 သိန်း 1571 သိန်း 1581 သိန်း 1591 သိန်း 1601 သိန်း 1611 သိန်း 1621 သိန်း 1631 သိန်း 1641 သိန်း 1651 သိန်း 1661 သိန်း 1671 သိန်း 1681 သိန်း 1691 သိန်း 1701 သိန်း 1711 သိန်း 1721 သိန်း 1731 သိန်း 1741 သိန်း 1751 သိန်း 1761 သိန်း 1771 သိန်း 1781 သိန်း 1791 သိန်း 1801 သိန်း 1811 သိန်း 1821 သိန်း 1831 သိန်း 1841 သိန်း 1851 သိန်း 1861 သိန်း 1871 သိန်း 1881 သိန်း 1891 သိန်း 1901 သိန်း 1911 သိန်း 1921 သိန်း 1931 သိန်း 1941 သိန်း 1951 သိန်း 1961 သိန်း 1971 သိန်း 1981 သိန်း 1991 သိန်း 2001 သိန်း 2011 သိန်း 2021 သိန်း 2031 သိန်း 2041 သိန်း 2051 သိန်း 2061 သိန်း 2071 သိန်း 2081 သိန်း 2091 သိန်း 2101 သိန်း 2111 သိန်း 2121 သိန်း 2131 သိန်း 2141 သိန်း 2151 သိန်း 2161 သိန်း 2171 သိန်း 2181 သိန်း 2191 သိန်း 2201 သိန်း 2211 သိန်း 2221 သိန်း 2231 သိန်း 2241 သိန်း 2251 သိန်း 2261 သိန်း 2271 သိန်း 2281 သိန်း 2291 သိန်း 2301 သိန်း 2311 သိန်း 2321 သိန်း 2331 သိန်း 2341 သိန်း 2351 သိန်း 2361 သိန်း 2371 သိန်း 2381 သိန်း 2391 သိန်း 2401 သိန်း 2411 သိန်း 2421 သိန်း 2431 သိန်း 2441 သိန်း 2451 သိန်း 2461 သိန်း 2471 သိန်း 2481 သိန်း 2491 သိန်း 2501 သိန်း 2511 သိန်း 2521 သိန်း 2531 သိန်း 2541 သိန်း 2551 သိန်း 2561 သိန်း 2571 သိန်း 2581 သိန်း 2591 သိန်း 2601 သိန်း 2611 သိန်း 2621 သိန်း 2631 သိန်း 2641 သိန်း 2651 သိန်း 2661 သိန်း 2671 သိန်း 2681 သိန်း 2691 သိန်း 2701 သိန်း 2711 သိန်း 2721 သိန်း 2731 သိန်း 2741 သိန်း 2751 သိန်း 2761 သိန်း 2771 သိန်း 2781 သိန်း 2791 သိန်း 2801 သိန်း 2811 သိန်း 2821 သိန်း 2831 သိန်း 2841 သိန်း 2851 သိန်း 2861 သိန်း 2871 သိန်း 2881 သိန်း 2891 သိန်း 2901 သိန်း 2911 သိန်း 2921 သိန်း 2931 သိန်း 2941 သိန်း 2951 သိန်း 2961 သိန်း 2971 သိန်း 2981 သိန်း 2991 သိန်း 3001 သိန်း 3011 သိန်း 3021 သိန်း 3031 သိန်း 3041 သိန်း 3051 သိန်း 3061 သိန်း 3071 သိန်း 3081 သိန်း 3091 သိန်း 3101 သိန်း 3111 သိန်း 3121 သိန်း 3131 သိန်း 3141 သိန်း 3151 သိန်း 3161 သိန်း 3171 သိန်း 3181 သိန်း 3191 သိန်း 3201 သိန်း 3211 သိန်း 3221 သိန်း 3231 သိန်း 3241 သိန်း 3251 သိန်း 3261 သိန်း 3271 သိန်း 3281 သိန်း 3291 သိန်း 3301 သိန်း 3311 သိန်း 3321 သိန်း 3331 သိန်း 3341 သိန်း 3351 သိန်း 3361 သိန်း 3371 သိန်း 3381 သိန်း 3391 သိန်း 3401 သိန်း 3411 သိန်း 3421 သိန်း 3431 သိန်း 3441 သိန်း 3451 သိန်း 3461 သိန်း 3471 သိန်း 3481 သိန်း 3491 သိန်း 3501 သိန်း 3511 သိန်း 3521 သိန်း 3531 သိန်း 3541 သိန်း 3551 သိန်း 3561 သိန်း 3571 သိန်း 3581 သိန်း 3591 သိန်း 3601 သိန်း 3611 သိန်း 3621 သိန်း 3631 သိန်း 3641 သိန်း 3651 သိန်း 3661 သိန်း 3671 သိန်း 3681 သိန်း 3691 သိန်း 3701 သိန်း 3711 သိန်း 3721 သိန်း 3731 သိန်း 3741 သိန်း 3751 သိန်း 3761 သိန်း 3771 သိန်း 3781 သိန်း 3791 သိန်း 3801 သိန်း 3811 သိန်း 3821 သိန်း 3831 သိန်း 3841 သိန်း 3851 သိန်း 3861 သိန်း 3871 သိန်း 3881 သိန်း 3891 သိန်း 3901 သိန်း 3911 သိန်း 3921 သိန်း 3931 သိန်း 3941 သိန်း 3951 သိန်း 3961 သိန်း 3971 သိန်း 3981 သိန်း 3991 သိန်း 4001 သိန်း 4011 သိန်း 4021 သိန်း 4031 သိန်း 4041 သိန်း 4051 သိန်း 4061 သိန်း 4071 သိန်း 4081 သိန်း 4091 သိန်း 4101 သိန်း 4111 သိန်း 4121 သိန်း 4131 သိန်း 4141 သိန်း 4151 သိန်း 4161 သိန်း 4171 သိန်း 4181 သိန်း 4191 သိန်း 4201 သိန်း 4211 သိန်း 4221 သိန်း 4231 သိန်း 4241 သိန်း 4251 သိန်း 4261 သိန်း 4271 သိန်း 4281 သိန်း 4291 သိန်း 4301 သိန်း 4311 သိန်း 4321 သိန်း 4331 သိန်း 4341 သိန်း 4351 သိန်း 4361 သိန်း 4371 သိန်း 4381 သိန်း 4391 သိန်း 4401 သိန်း 4411 သိန်း 4421 သိန်း 4431 သိန်း 4441 သိန်း 4451 သိန်း 4461 သိန်း 4471 သိန်း 4481 သိန်း 4491 သိန်း 4501 သိန်း 4511 သိန်း 4521 သိန်း 4531 သိန်း 4541 သိန်း 4551 သိန်း 4561 သိန်း 4571 သိန်း 4581 သိန်း 4591 သိန်း 4601 သိန်း 4611 သိန်း 4621 သိန်း 4631 သိန်း 4641 သိန်း 4651 သိန်း 4661 သိန်း 4671 သိန်း 4681 သိန်း 4691 သိန်း 4701 သိန်း 4711 သိန်း 4721 သိန်း 4731 သိန်း 4741 သိန်း 4751 သိန်း 4761 သိန်း 4771 သိန်း 4781 သိန်း 4791 သိန်း 4801 သိန်း 4811 သိန်း 4821 သိန်း 4831 သိန်း 4841 သိန်း 4851 သိန်း 4861 သိန်း 4871 သိန်း 4881 သိန်း 4891 သိန်း 4901 သိန်း 4911 သိန်း 4921 သိန်း 4931 သိန်း 4941 သိန်း 4951 သိန်း 4961 သိန်း 4971 သိန်း 4981 သိန်း 4991 သိန်း 5001 သိန်း 5011 သိန်း 5021 သိန်း 5031 သိန်း 5041 သိန်း 5051 သိန်း 5061 သိန်း 5071 သိန်း 5081 သိန်း 5091 သိန်း 5101 သိန်း 5111 သိန်း 5121 သိန်း 5131 သိန်း 5141 သိန်း 5151 သိန်း 5161 သိန်း 5171 သိန်း 5181 သိန်း 5191 သိန်း 5201 သိန်း 5211 သိန်း 5221 သိန်း 5231 သိန်း 5241 သိန်း 5251 သိန်း 5261 သိန်း 5271 သိန်း 5281 သိန်း 5291 သိန်း 5301 သိန်း 5311 သိန်း 5321 သိန်း 5331 သိန်း 5341 သိန်း 5351 သိန်း 5361 သိန်း 5371 သိန်း 5381 သိန်း 5391 သိန်း 5401 သိန်း 5411 သိန်း 5421 သိန်း 5431 သိန်း 5441 သိန်း 5451 သိန်း 5461 သိန်း 5471 သိန်း 5481 သိန်း 5491 သိန်း 5501 သိန်း 5511 သိန်း 5521 သိန်း 5531 သိန်း 5541 သိန်း 5551 သိန်း 5561 သိန်း 5571 သိန်း 5581 သိန်း 5591 သိန်း 5601 သိန်း 5611 သိန်း 5621 သိန်း 5631 သိန်း 5641 သိန်း 5651 သိန်း 5661 သိန်း 5671 သိန်း 5681 သိန်း 5691 သိန်း 5701 သိန်း 5711 သိန်း 5721 သိန်း 5731 သိန်း 5741 သိန်း 5751 သိန်း 5761 သိန်း 5771 သိန်း 5781 သိန်း 5791 သိန်း 5801 သိန်း 5811 သိန်း 5821 သိန်း 5831 သိန်း 5841 သိန်း 5851 သိန်း 5861 သိန်း 5871 သိန်း 5881 သိန်း 5891 သိန်း 5901 သိန်း 5911 သိန်း 5921 သိန်း 5931 သိန်း 5941 သိန်း 5951 သိန်း 5961 သိန်း 5971 သိန်း 5981 သိန်း 5991 သိန်း 6001 သိန်း 6011 သိန်း 6021 သိန်း 6031 သိန်း 6041 သိန်း 6051 သိန်း 6061 သိန်း 6071 သိန်း 6081 သိန်း 6091 သိန်း 6101 သိန်း 6111 သိန်း 6121 သိန်း 6131 သိန်း 6141 သိန်း 6151 သိန်း 6161 သိန်း 6171 သိန်း 6181 သိန်း 6191 သိန်း 6201 သိန်း 6211 သိန်း 6221 သိန်း 6231 သိန်း 6241 သိန်း 6251 သိန်း 6261 သိန်း 6271 သိန်း 6281 သိန်း 6291 သိန်း 6301 သိန်း 6311 သိန်း 6321 သိန်း 6331 သိန်း 6341 သိန်း 6351 သိန်း 6361 သိန်း 6371 သိန်း 6381 သိန်း 6391 သိန်း 6401 သိန်း 6411 သိန်း 6421 သိန်း 6431 သိန်း 6441 သိန်း 6451 သိန်း 6461 သိန်း 6471 သိန်း 6481 သိန်း 6491 သိန်း 6501 သိန်း 6511 သိန်း 6521 သိန်း 6531 သိန်း 6541 သိန်း 6551 သိန်း 6561 သိန်း 6571 သိန်း 6581 သိန်း 6591 သိန်း 6601 သိန်း 6611 သိန်း 6621 သိန်း 6631 သိန်း 6641 သိန်း 6651 သိန်း 6661 သိန်း 6671 သိန်း 6681 သိန်း 6691 သိန်း 6701 သိန်း 6711 သိန်း 6721 သိန်း 6731 သိန်း 6741 သိန်း 6751 သိန်း 6761 သိန်း 6771 သိန်း 6781 သိန်း 6791 သိန်း 6801 သိန်း 6811 သိန်း 6821 သိန်း 6831 သိန်း 6841 သိန်း 6851 သိန်း 6861 သိန်း 6871 သိန်း 6881 သိန်း 6891 သိန်း 6901 သိန်း 6911 သိန်း 6921 သိန်း 6931 သိန်း 6941 သိန်း 6951 သိန်း 6961 သိန်း 6971 သိန်း 6981 သိန်း 6991 သိန်း 7001 သိန်း 7011 သိန်း 7021 သိန်း 7031 သိန်း 7041 သိန်း 7051 သိန်း 7061 သိန်း 7071 သိန်း 7081 သိန်း 7091 သိန်း 7101 သိန်း 7111 သိန်း 7121 သိန်း 7131 သိန်း 7141 သိန်း 7151 သိန်း 7161 သိန်း 7171 သိန်း 7181 သိန်း 7191 သိန်း 7201 သိန်း 7211 သိန်း 7221 သိန်း 7231 သိန်း 7241 သိန်း 7251 သိန်း 7261 သိန်း 7271 သိန်း 7281 သိန်း 7291 သိန်း 7301 သိန်း 7311 သိန်း 7321 သိန်း 7331 သိန်း 7341 သိန်း 7351 သိန်း 7361 သိန်း 7371 သိန်း 7381 သိန်း 7391 သိန်း 7401 သိန်း 7411 သိန်း 7421 သိန်း 7431 သိန်း 7441 သိန်း 7451 သိန်း 7461 သိန်း 7471 သိန်း 7481 သိန်း 7491 သိန်း 7501 သိန်း 7511 သိန်း 7521 သိန်း 7531 သိန်း 7541 သိန်း 7551 သိန်း 7561 သိန်း 7571 သိန်း 7581 သိန်း 7591 သိန်း 7601 သိန်း 7611 သိန်း 7621 သိန်း 7631 သိန်း 7641 သိန်း 7651 သိန်း 7661 သိန်း 7671 သိန်း 7681 သိန်း 7691 သိန်း 7701 သိန်း 7711 သိန်း 7721 သိန်း 7731 သိန်း 7741 သိန်း 7751 သိန်း 7761 သိန်း 7771 သိန်း 7781 သိန်း 7791 သိန်း 7801 သိန်း 7811 သိန်း 7821 သိန်း 7831 သိန်း 7841 သိန်း 7851 သိန်း 7861 သိန်း 7871 သိန်း 7881 သိန်း 7891 သိန်း 7901 သိန်း 7911 သိန်း 7921 သိန်း 7931 သိန်း 7941 သိန်း 7951 သိန်း 7961 သိန်း 7971 သိန်း 7981 သိန်း 7991 သိန်း 8001 သိန်း 8011 သိန်း 8021 သိန်း 8031 သိန်း 8041 သိန်း 8051 သိန်း 8061 သိန်း 8071 သိန်း 8081 သိန်း 8091 သိန်း 8101 သိန်း 8111 သိန်း 8121 သိန်း 8131 သိန်း 8141 သိန်း 8151 သိန်း 8161 သိန်း 8171 သိန်း 8181 သိန်း 8191 သိန်း 8201 သိန်း 8211 သိန်း 8221 သိန်း 8231 သိန်း 8241 သိန်း 8251 သိန်း 8261 သိန်း 8271 သိန်း 8281 သိန်း 8291 သိန်း 8301 သိန်း 8311 သိန်း 8321 သိန်း 8331 သိန်း 8341 သိန်း 8351 သိန်း 8361 သိန်း 8371 သိန်း 8381 သိန်း 8391 သိန်း 8401 သိန်း 8411 သိန်း 8421 သိန်း 8431 သိန်း 8441 သိန်း 8451 သိန်း 8461 သိန်း 8471 သိန်း 8481 သိန်း 8491 သိန်း 8501 သိန်း 8511 သိန်း 8521 သိန်း 8531 သိန်း 8541 သိန်း 8551 သိန်း 8561 သိန်း 8571 သိန်း 8581 သိန်း 8591 သိန်း 8601 သိန်း 8611 သိန်း 8621 သိန်း 8631 သိန်း 8641 သိန်း 8651 သိန်း 8661 သိန်း 8671 သိန်း 8681 သိန်း 8691 သိန်း 8701 သိန်း 8711 သိန်း 8721 သိန်း 8731 သိန်း 8741 သိန်း 8751 သိန်း 8761 သိန်း 8771 သိန်း 8781 သိန်း 8791 သိန်း 8801 သိန်း 8811 သိန်း 8821 သိန်း 8831 သိန်း 8841 သိန်း 8851 သိန်း 8861 သိန်း 8871 သိန်း 8881 သိန်း 8891 သိန်း 8901 သိန်း 8911 သိန်း 8921 သိန်း 8931 သိန်း 8941 သိန်း 8951 သိန်း 8961 သိန်း 8971 သိန်း 8981 သိန်း 8991 သိန်း 9001 သိန်း 9011 သိန်း 9021 သိန်း 9031 သိန်း 9041 သိန်း 9051 သိန်း 9061 သိန်း 9071 သိန်း 9081 သိန်း 9091 သိန်း 9101 သိန်း 9111 သိန်း 9121 သိန်း 9131 သိန်း 9141 သိန်း 9151 သိန်း 9161 သိန်း 9171 သိန်း 9181 သိန်း 9191 သိန်း 9201 သိန်း 9211 သိန်း 9221 သိန်း 9231 သိန်း 9241 သိန်း 9251 သိန်း 9261 သိန်း 9271 သိန်း 9281 သိန်း 9291 သိန်း 9301 သိန်း 9311 သိန်း 9321 သိန်း 9331 သိန်း 9341 သိန်း 9351 သိန်း 9361 သိန်း 9371 သိန်း 9381 သိန်း 9391 သိန်း 9401 သိန်း 9411 သိန်း 9421 သိန်း 9431 သိန်း 9441 သိန်း 9451 သိန်း 9461 သိန်း 9471 သိန်း 9481 သိန်း 9491 သိန်း 9501 သိန်း 9511 သိန်း 9521 သိန်း 9531 သိန်း 9541 သိန်း 9551 သိန်း 9561 သိန်း 9571 သိန်း 9581 သိန်း 9591 သိန်း 9601 သိန်း 9611 သိန်း 9621 သိန်း 9631 သိန်း 9641 သိန်း 9651 သိန်း 9661 သိန်း 9671 သိန်း 9681 သိန်း 9691 သိန်း 9701 သိန်း 9711 သိန်း 9721 သိန်း 9731 သိန်း 9741 သိန်း 9751 သိန်း 9761 သိန်း 9771 သိန်း 9781 သိန်း 9791 သိန်း 9801 သိန်း 9811 သိန်း 9821 သိန်း 9831 သိန်း 9841 သိန်း 9851 သိန်း 9861 သိန်း 9871 သိန်း 9881 သိန်း 9891 သိန်း 9901 သိန်း 9911 သိန်း 9921 သိန်း 9931 သိန်း 9941 သိန်း 9951 သိန်း 9961 သိန်း 9971 သိန်း 9981 သိန်း 9991 သိန်း	Reset
ရှာရန် မြို့ ၊ မြို့နယ်များ:
စက်မှုဇုန် သီးသန့် စက်မှုဇုန်များ
ငှားရန် - စက်မှုဇုန်
ဧရိယာ - 54000 sqft
ရောင်းရန် - စက်မှုဇုန်
ဧရိယာ - 87120 sqft
နောက်ဆုံးရ စက်မှုဇုန်းများ ငှားရန် - လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်ရှိ ဂိုဒေါင်ပါ စက်မှုဇုန်မြေ ငှားရန်ရှိသည်
Advertised by Unity
ဧရိယာ : 16000 sqft
01-394725, 01-394537, 01-394080,…
လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်ရှိ ဂိုဒေါင်ပါ စက်မှုဇုန်မြေ ငှားရန်ရှိသည်
ငှားရန် - ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်ရှိ ဂိုဒေါင်ပါ စက်မှုဇုန်မြေ ငှားမည်
ဧရိယာ : 37700 sqft
ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်ရှိ ဂိုဒေါင်ပါ စက်မှုဇုန်မြေ ငှားမည်
ငှားရန် - သာဓုကန်စက်မှုဇုန်တွင် ဂိုဒေါင်ပါသော စက်မှုဇုန်မြေ ငှားမည်
ဧရိယာ : 182952 sqft
သာဓုကန်စက်မှုဇုန်တွင် ဂိုဒေါင်ပါသော စက်မှုဇုန်မြေ ငှားမည်
ငှားရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းစက်မှုဇုန်တွင် ဂိုဒေါင်ပါသော စက်မှုဇုန်မြေ ငှားရန်ရှိသည်
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းစက်မှုဇုန်တွင် ဂိုဒေါင်ပါသော စက်မှုဇုန်မြေ ငှားရန်ရှိသည်
ငှားရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းဇုန်ရှိ ဂိုဒေါင်ပါ စက်မှုဇုန်မြေ ငှားမည်
ဧရိယာ : 130680 sqft
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းဇုန်ရှိ ဂိုဒေါင်ပါ စက်မှုဇုန်မြေ ငှားမည်
ရောင်းရန် - တောင်ဒဂုံဇုန်ရှိ ဂရန်အမည်ပေါက် စက်မှုဇုန်မြေ ရောင်းမည်
ဧရိယာ : 7200 sqft
တောင်ဒဂုံဇုန်ရှိ ဂရန်အမည်ပေါက် စက်မှုဇုန်မြေ ရောင်းမည်
ငှားရန် - တောင်ဒဂုံဇုန်ရှိ အုတ်ခတ်ထားပြီး ရေမီးစုံပါသော စက်မှုဇုန်မြေ ရောင်းမည်
တောင်ဒဂုံဇုန်ရှိ အုတ်ခတ်ထားပြီး ရေမီးစုံပါသော စက်မှုဇုန်မြေ ရောင်းမည်
ရောင်းရန် - သာကေတဇုန်ရှိ ဂရန်ပါသော စက်မှုဇုန်မြေ ရောင်းရန်ရှိသည်
သာကေတဇုန်ရှိ ဂရန်ပါသော စက်မှုဇုန်မြေ ရောင်းရန်ရှိသည်
သာကေတ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ရောင်းရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းဇုန်ရှိ ဂိုဒေါင်ပါ စက်မှုဇုန်မြေ ရောင်းမည်
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းဇုန်ရှိ ဂိုဒေါင်ပါ စက်မှုဇုန်မြေ ရောင်းမည်
ရောင်းရန် - အရှေ့ဒဂုံဇုန်ရှိ ဂိုဒေါင်ပါသော စက်မှုဇုန်မြေ ရောင်းမည်
ဧရိယာ : 69696 sqft
အရှေ့ဒဂုံဇုန်ရှိ ဂိုဒေါင်ပါသော စက်မှုဇုန်မြေ ရောင်းမည်
123456> Last My Shwe Property
Shwe Property နဲ့ ကြော်ငြာပါ။
အကျိုးဆောင် Directory မှာပါဝင်ပါ။
အိမ်ရှာသူ ၊ အိမ်ဝယ်သူ များနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။
သင်ဝယ်ယူလို တဲ့ အိမ်ခြံမြေကို အကျိုးဆောင်များကို အသိပေးပါ။
အပတ်စဉ် အိမ်ခြံမြေသတင်းများကို ရယူပါ။
Shwe Property မှာ အိမ်ရှာပါ။
အိမ်ပိုင်ရှင်များ အတွက် ကြော်ငြာတင်ရန်
1 SGD = 797.00 Kyats.
1 USD = 1030.00 Kyats.
1 SGD = 792.00 Kyats.
(As of 26 November 2014)